October 17, 2018 - खबरम्यागजिन
डा. सुरज कर्माचार्य वर्षमा एकपटक आउने चाड हो भनेर खानपिनमा ध्यान नदिने स्वभाव आमनेपालीको देखिन्छ । तर, यही १० देखि १५ दिनको अवधिको हाम्रो जीवनशैलीमा गरिने लापर्बाहीले मृत्युको अवस्थासम्म पु-याउन सक्छ । खानका लागि बनाइएको […]
दशैंमा के गर्ने, के नगर्ने
डा. अरुणा उप्रेती ‘दसैं आयो, खाउँला पिउँला…’ प्रायः बालबच्चाका मुखबाट दसैं आएसँगै यो उक्ति निक्लने गर्छ। दसैं भन्नेबित्तिकै सबैले मीठो-मीठो खानेकुरा सम्झिन्छन्। माछामासु, मिठाई र फलफूलजस्ता परिकारलाई दसैंको बेलामा विशेष प्राथमिकतामा राखिन्छ। हरेक चाडपर्वमा हामीले […]
एक बनबस्तीवासीको हत्या : हत्यारालाई कानूनी कार्वाही भएको हुनुपर्छ, परिवारले न्याय पाउनुपर्छ : हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशन
कालेबुङ, 17 अक्टोबर कालेबुङको १२ घरे बनबस्ती नवम रेञ्ज कार्यालयअघि डिपोमा बनविभागका कर्मचारी अनि 12 घरेका युवाहरू तास खेलिरहेका थिए। सोही विभागमा कार्यरत कुमार राईका छोरा सुरेन राई र उनीहरूबीच भनाभैरी चल्यो। सुरेन राईको भनाई […]
सुमेटी नेताको बिजनबारीमा हत्या
बिजनबारी, 17 अक्टोबर चुङथुङ तामसाङ समष्टि अन्तरगत चुङथुङ लोवर डिभिजन निवासी तथा सुमेटी मोर्चा केन्द्रिय समिति सदस्य लगभग ४६ वर्षीय आनन्द गुरुङको आपसी मदभेदको कारण ज्यान गएको घटना प्रकाशमा आएको छ। हिजो राती लगभग ७:३० […]
सायद कमैले सोचेका थिए होलान्, मि टु अभियानले यो सफलता पाउला भन्ने। हेर्दाहेर्दै अमेरिकाबाट फैलिएको आगो संसारभर फैलियो। २०१७ को अक्टोबरदेखि सामाजिक सञ्जालमा सुरु भएको थियो, मि टु ह्यासट्याग। यौन दुर्व्यवहार आलोचना गर्दै महिलाले यो […]
वैज्ञानिक तथा प्राविधिकहरुले १२ वर्षको निरन्तर प्रयासपछि विश्वकै पहिलो उड्ने कार तयार पारेका छन् । अब यसको विक्री सुरु गर्ने तर्खर गरिँदैछ । कार निर्माता कम्पनिले अमेरिकाबाट अर्को महिनादेखि यसको अग्रिम–बुकिङ गर्दैछ । ग्राहकले भने अर्को वर्षदेखि मात्रै […]